Paikady teknika 3 ambony ho an'ny mpanonta amin'ny 2021
Talata, Martsa 30, 2021 Alatsinainy Martsa 29, 2021 Jeff Kupietzky
Sarotra tamin'ny mpitory ny taona lasa. Noho ny fisavorovoroan'ny COVID-19, ny fifidianana ary ny korontana ara-tsosialy dia betsaka ny olona no nandany vaovao sy fialamboly betsaka kokoa tamin'ny taona lasa noho ny teo aloha. Saingy ny fisalasalany amin'ireo loharanom-baovao manome izany vaovao izany dia nahatratra ny avo indrindra koa, satria ny fiakaran'ny vidin-diso dia nanosika ny fahatokisana ny media sosialy ary na ny motera fikarohana aza dia mandrakitra ambany. Ny olana dia manana mpitory manerana ny karazana atiny miady
Cheetah Digital: Ahoana ny fampandraisana anjara ny mpanjifa amin'ny toekarena fitokisana
Nanangana rindrina hiarovana ny tenany amin'ireo mpisehatra ratsy ireo mpanjifa, ary nampiakatra ny fari-piainan'izy ireo amin'ireo marika fandaniany ny volany. Ireo mpanjifa dia maniry ny hividy amin'ny marika izay tsy mampiseho andraikitra ara-tsosialy fotsiny, fa izay mihaino ihany koa, mangataka fanekena ary hanaja ny fiainany manokana. Io no antsoina hoe toekarena fitokisana, ary zavatra tokony hananan'ny marika rehetra laharam-pahamehana amin'ny paikadin'izy ireo izany. Fifanakalozana soatoavina miaraka amin'ireo olona tratry ny